Umthandazo kuSanta Raphael iNgelosi enkulu Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Kubo bonke abo bahlala bebeka iSaint Raphael iNgelosi enkulu, kweli nqaku uyakufumana Umthandazo kuSanta Raphael Ingelosi enkulu.
Imithandazo ngokholo nothando
1 Umthandazo kuSanta Raphael iNgelosi enkulu
2 Umthandazo kuSanta Raphael iNgelosi enkulu: Ngubani uSaint Raphael?
2.1 # 1 Umthandazo wokuphilisa
2.2 # 2 Umthandazo kuSanta Raphael iNgelosi enkulu: Umthandazo wabagulayo
2.3 # 3 Umthandazo weentsuku ezingama-21
2.4 # 4 Umthandazo kuSanta Raphael iNgelosi enkulu: Umthandazo wokuthandana ngaphambi komtshato
2.5 # 5 Imithandazo yokhuseleko
Kuyaziwa ukuba i-Archangel Saint Raphael ngulowo ufuzisela inkangeleko kaThixo, onceda umntu ukuba akwazi ukugcina ibhalansi nganye yeemvakalelo kunye nempilo yomzimba wakhe. Kwelinye icala, ungomnye weengelosi eziyintloko ezisixhenxe eziphambi kwetrone kaThixo.
San Rafael, igama lakhe elithetha "Ukuphilisa kaThixo", ngumphathi womyeni nomyeni, oogqirha, izibhedlele kunye nabagulayo; Kungenxa yokuba inamandla okuphilisa kwaye iyakwazi ukukhusela ubudlelwane. Inombali owaziwayo wokuphilisa, olunyango lobumfama bukaTobit kwaye ngenxa yesi sizathu, abo bangaboniyo banikwe iSaint Raphael.
Umthandazo kuSanta Raphael iNgelosi enkulu: Ngubani uSaint Raphael?
I-Archangel Saint Raphael, elandelwa ziingelosi ezinkulu uMichael noGabriel, uyaziwa ngokuba yenye yeengelosi ezibaluleke kakhulu kwiinkolo zika-Abraham nakwimeko yokomoya yanamhlanje. Ngokunjalo, yenye yeengelosi ezinkulu ezintathu kwaye iyeyona icelwe kakhulu xa ifuna ukuphilisa umntu, yaziwa ngokuba yi "Iyeza likaThixo" kwaye ngenxa yoko, inikwe abantu abagulayo okanye abo bafuna ukuphiliswa ngokomoya.
Ngendlela efanayo, iNgelosi enkulu uSan Rafael ikwaqabane labo bonke abahambi. Ngaphandle kwemvelaphi yakudala kakhulu, indima yakhe njengomphilisi igcinwe kule minyaka idlulileyo kwaye izigidi zabantu zibanga ukuba zifumene imimangaliso eyanikwa yingelosi enkulu.
Kwimeko apho ufumanisa ukuba ufuna ukunyanga ngokwasemzimbeni okanye ngokweemvakalelo, ke kweli nqaku siza kukwazisa Umthandazo kuSanta Raphael iNgelosi enkulu:
# 1 Umthandazo wokuphilisa
«O isikhokelo esinobubele nesokomoya uSanta Raphael iNgelosi enkulu, ndiyakucela njengomphathi wabo bahlutshwa kukugula komzimba okanye zizifo. Ndijikela kuwe, ndibongoza uncedo lwakho oluvela kuThixo kwimfuno yam yangoku (khankanya isicelo apha). Ukuba kukuthanda kukaThixo, deign ukuphilisa isigulo sam, okanye ubuncinci undiphe ubabalo kwaye amandla Ndidinga ukukwazi ukuyinyamezela ngomonde, ndiyinikela ukuze ndixolelwe izono zam kunye nosindiso lomphefumlo wam.
Ndifundise ukudibanisa iintlungu zam kunye nezo zikaYesu noMariya kunye nokufuna ubabalo lukaThixo ngomthandazo nakubudlelane. (…) Ndiphe ubabalo nentsikelelo kaThixo kunye nenkoliseko endiyicelayo kuwe. Gqirha omkhulu kaThixo, khetha ukuba undiphilise njengoko wenzayo kuTobbi ukuba kuyintando yoMdali. U-Saint Raphael, uLwazi lukaThixo, iNgelosi yezeMpilo, amayeza kaThixo, ndithandazele. Amen«
# 2 Umthandazo kuSanta Raphael iNgelosi enkulu: Umthandazo wabagulayo
«Ingelosi eyingcwele eyingcwele Raphael, iyeza likaThixo, ndikhokele kolu hambo lokufunda kunye nokuhlanjululwa, ndincede ndibone izifundo ezindikhulula kuwo onke amatyala am, amaxhala kunye neengcinga ezimbi. Yiba sisikhokelo sendlela yosindiso, kwindlela eya kuThando oluNgcwele, ukuze kubonakale kwindalo yonke, amandla ohlaziyo kwakhona nokuphilisa kukaThixo.
Ndiyakucela ukuba ube ngumlingane kolu hambo lobomi kunye nenkxaso rhoqo kwigunya elimele abasebenzi bakho. Ndijikeleze ngethemba kunye nokuphilisa okuluhlaza kwengubo yakho, kwaye uthele iyeza lokukhanya phezu kwam.
Enkosi sithandwa esikhulu, Raphael, ngenkampani yakho yothando ephilisayo kunye nenkampani yokuphilisa, koluhambo olungcwele lomzimba, ukufumana umanyano nomphefumlo, ngokwentando kaThixo, ngendlela egqibeleleyo, ukuze kulunge kubo bonke. el mundo, naphantsi kobabalo lukaThixo. Amen. "
# 3 Umthandazo weentsuku ezingama-21
«Nkosi Thixo, Osenyangweni, mkhuseli kunye nomdali wendalo iphela, vumela, ndiyakubongoza ngentliziyo yam ezele yintobeko, ukuba uve imithandazo yam elula, endiyenzayo kulo mthandazo kuSanta Raphael iNgelosi eyintloko kangangeentsuku ezingama-21, ukhuseleko.
Mthumele, ngobabalo lwakho oluNgcwele, ukuba undikhusele kubo bonke obu bubi (dwelisa ububi okanye izigulo apha) ezenze ubukho bam baba bububi obukhulu, Thixo, onamandla onke, uhlawule ingqalelo yakho ekuthandazeleni, oyiNgcwele uRafael iNgelosi enkulu yenza. kum, ndisikelele, Thixo. Amen. "
#4 Umthandazo kuSanta Raphael iNgelosi enkulu: Umthandazo wokuthandana ngaphambi komtshato
«(…) USaint Raphael, umxhasi onothando wabo bafuna amaqabane omtshato, ndincede kwesona sigqibo siphambili ebomini bam. Njengendoda ebalaseleyo, dibana ubomi bakho bonke ubuntu obubonakalisa ezinye zeempawu ezahlukileyo zikaYesu noMariya.
Kwanga ingachaneka, inyaniseke, inyulu, inyanisekile kwaye inesidima, ukuze ngemikhosi emanyeneyo kunye nothando olunyulu nolungenamdla, singazifundisa ngokugqibelela komphefumlo nomzimba, kunye nabantwana uThixo aya kubabeka ezandleni zethu. (…) Amen»
# 5 Imithandazo yokhuseleko
«Ingelosi enkulu uSaint Raphael, owathi:« Mbonge uThixo yonke imihla kwaye ubhengeze izibonelelo zakhe. Ziqhelise ukwenza okuhle kwaye awuyi kukhubeka ebubini. Ukuthandaza ngokuzila ukutya kulungile, kwaye ukupha amalizo kulunge ngakumbi kunokuqokelela igolide. Amen «
Ukongeza kule mithandazo mihlanu yokuzibophelela kwi-Archangel Saint Raphael, siya kukushiya a Umthandazo kuSanta Raphael iNgelosi enkulu Yongeza apho unika lonke ukholo lwakho:
«(…) O mncedisi omkhulu kaThixo, wena onokwenza yonke into kwaye unokuphilisa nayiphi na indoda. Ndiyakucela ukuba ubukele impilo yam, ukuze ungafumani naluphi na uhlobo lokugula kakhulu. Kwakhona, ndithandazela bonke abagulayo abaphethwe zintlungu noxinzelelo. Kubo ndicela unyango olufanelekileyo ukuze baqhubele phambili. Amen.«
Kubalulekile ukuba uchaze oko xa usenza i- Umthandazo kuSanta Raphael iNgelosi enkulu, kufuneka ubeke lonke ukholo lwakho nothando.
Ukuba ulithandile eli nqaku kwaye ufuna ukwazi imithandazo engakumbi yokubulela iNkosi yethu, siyakumema ukuba ufunde le enye malunga Ukuphela koMthandazo woNyaka.